बिहान यी सत्कर्म गर्दा कहिल्यै आउदैन परिवारमा संकट र गरिवी ! – Patrika Nepal
बिहान यी सत्कर्म गर्दा कहिल्यै आउदैन परिवारमा संकट र गरिवी !
मंग्सिर ६, २०७८ सोमबार 36
प्रभातकालिन सत्कर्महरुले हाम्रो दैनिकीमा विशेष प्रभाव पार्दछन । वास्तवमा हरेक दिनहरुको समस्टिगत योग नै हाम्रो जीवन हो । तपाईले हरेक बिहान गर्ने सत्कर्मले तपाईको जीवन निर्देशित गरिरहेको हुन्छ ।विहान यस्ता कार्यहरु गर्नुहोस् स्स् तपाईको घरमा कहिल्यै पैसाको कमी हुनेछैन ।
जीवनमा सुख समृद्धि बनाइराख्नको लागि हाम्रा पूर्वजहरुले पहिलेदेखी नै धेरै परम्पराहरु मान्दै आएको पाइन्छ । तर दुखको कुरा आजकालको आधुनिक युगमा धेरै मानिसहरुले पुराना परम्पराहरु मान्न छाडिसके ।ज्योतिष विज्ञानका अनुसार मानिसहरुले त्यस्ता पुराना परम्पराहरुको ध्यान आज पनि राखेमा त्यसबाट सकरात्म कफलहरु पाइन्छन । बिहान सबेरै यस्ता परम्परागत काम गर्नाले घरमा लक्ष्मीको साथमा अन्य सबै देवीदेवताहरुको कृपा पाइन्छ ।
बिहानबिहानै हत्केला हेर्नुहोस:बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो हत्केला हेर्नुहोस । मान्यता यो छ कि यो काम गर्नाले महालक्ष्मी, सरस्वतीको साथमा भगवान् विष्णुको कृपा समेत मिल्छ ।मन्दिर सफा गर्नुहोसघरको मन्दिरमा मुर्ति र पुजाको सामान सही ढंगले सजाएको हुनपर्छ । यसबाट देवीदेवता प्रशन्न हुन्छन् र कुन्डलीको दोष पनि शान्त हुनसक्छ ।बिहानै भुमिलाई प्रणाम गर्नुहोस” बिहान पलङबाट खुट्टा भुँईमा राख्नभन्दा पहिले भुमिलाई प्रणाम गर्न पर्छ । साथमा क्षमा पनि माग्नुपर्छ किनभने धर्तीमा खुट्टा राख्नाले हामीलाई दोष लाग्छ ।
गाईलाई रोटी खुवाउनुहोस्: सधै बिहान जब रोटी बनाउनुहुन्छ तब पहिलो रोटी गाईको लागि छुट्याउनुहोस । तपाईको घर वरपर गाई छ भने त्यो रोटी गाईलाई खुवाउनुहोस । यसतो अर्थ लक्ष्मी माताको सेवा हो। रोटी नभए अन्य कुनै पनि आहारले लक्ष्मी माताको सेवा गर्न सकिन्छ । सुर्यलाई जल चढाउनुहोस्: सधैं बिहान सुर्यलाई जल चढाउन पर्छ । यस उपायबाट घरपरिवार र समाजमा मान सम्मान पाइन्छ र सुर्य सँग सम्बन्धित दोष छ भने त्यसबाट पनि मुक्ति पाइन्छ ।
यसैगरी हिन्दूधर्मशास्त्रअनुसार बुधबारको दिन बुध ग्रहप्रति समर्पित छ । बुधबारको व्रत बुधग्रहको कुप्रभावको शान्तिकामनाका निम्ति एवं धन, बुद्धि, विद्या र व्यापार वृद्धिका लागि पालना गर्ने गरिन्छ । यस दिन विशेष गरी विथाल–देव (कृष्णको अवतार) को पूजा गरिन्छ ।कुनै नयाँ कामको थालनाका लागि बुधबारको दिन अति शुभ मानिन्छ । साथै यस दिन कृष्ण भगवानको व्रत बस्नेले आफुले चाहेको फल प्राप्त गर्ने विश्वास गरिन्छ । यो व्रत विशाखा नक्षत्रयुक्त बुधबारबाट सुरु गर्नुपर्दछ । यसलाई कमसेकम ७ वटा बुधबारसम्म लिएर मात्र उद्यापन गर्नु पर्दछ ।
दुबै जना एकअर्कासित झगडा गर्न थाले । त्यसै बेला राज्यका सिपाहीहरू आएर त्यो पानी लिन जाने अमखोरा लिएको व्यक्तिलाई समात्न खोज्दै त्यस स्त्रीलाई सोध्छन् – यी दुईजना मध्ये तिम्रो असली पति चाहिँ कुन हो रु त्यसपछि त्यस स्त्रीले जबाब दिन सक्दिन । किनभने दवै व्यक्तिको सम्पूर्ण स्वरूप एकै किसिमको हुन्छ । बिचरी त्यस स्त्रीले कसलाई आफ्नो पति भन्नु, अल्मल्ल परिन् । अनि ईश्वरसित प्रार्थना गर्दै भन्छिन्, ‘हे ईश्वर यो के विचित्रको लीला हो ।’ त्यस स्त्रीको वास्तविक पति पनि ईश्वरलाई पुकारर्दै रुन कराउन थाल्छ ।
Prevसरकारले फेरि लकडाउन लगाउने गर्यो घोषणा, लकडाउन पहिला जस्तै हुने
Nextराशि अनुसार जान्नुहोस् तपाईंको ग्रह स्वामी र इष्टदेव कुन हुन् ? कसरी प्राप्त हुन्छ सफलता नै सफलता
दाहसं`स्कार गर्न हिँडेको कार दुर्घ`टना हुँदा कम्तिमा १८ को मृ´त्यु